You are at:Home»स्वास्थ्य»क्यान्सर कसरी लाग्छ ?
काठमाडौं । क्यान्सर आफैमा भयावह रोग । हामी भन्छौं, क्यान्सर लागेपछि मृत्यु नजिकिन्छ । तर, उदाहरणहरुले भन्छ, क्यान्सरलाई जित्न पनि सकिन्छ । क्यान्सरको सफल उपचारपछि सामान्य जीवन विताइरहेकाहरु हाम्रै समाजमा कति छन्, कति ।
यद्यपि क्यान्सरको उपचार त्यसबेला संभव हुन्छ, जब यसको यथासिघ्र उपचार खोजिन्छ । क्यान्सरको लक्षण देखापर्नसाथ उपचार गरेमा, पुन सामान्य जीवनमा फर्कन सकिन्छ । तर, उपचारका लागि हामीले समुचित पहल गरिरहेका छौनौं । नतिजा, बर्षेनी १५ हजारले नेपालमा क्यान्सरकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । बार्षिक ४० हजार त नयाँ क्यान्सरका रोगी थपिने तथ्यांक छ ।
क्यान्सरबाट बच्ने प्राकृतिक उपाय हो, स्वस्थ्य जीवनशैली । नियमित दिनचर्यामा आफुलाई अभ्यस्त गराउने । स्वस्थ्य र खुसी जीवन बाँच्ने । ताजा र सन्तुलित खानेकुरा सेवन गर्ने । योग, व्यायाम, प्राणायामलाई जीवनशैलीको हिस्सा बनाउने ।
शारीरिक रुपमा सक्रिय रहने । दिनहुँ पसिना बगाउने । एक अध्ययन अनुसार फिटनेसप्रति सचेत व्यक्तिको तुलनामा अल्छी व्यक्तिमा फोक्सोको क्यान्सर हुने आशंका ६८ प्रतिशत बढी हुन्छ । साथै कोलेरेक्टर क्यान्सर (अन्द्राको क्यान्सर) हुने खतरा ३८ प्रतिशत बढी हुन्छ । कार्डियो र रेजिस्टेन्स ट्रेनिङले हर्मोनल लेभल एवं प्रतिरक्षा क्षमता सही राख्छ । यसले गर्दा क्यान्सरको सेल्स विकास हुन पाउँदैन ।
तेललाई उच्च तापमानमा तताएपछि कार्सिनोजेनिक कम्पाउन्ड नामक हानिकारक केमिकल विकास हुन्छ, जो क्यान्सरको कारण बन्छ । त्यसैले तारेको, भुटेको खानेकुरा खान हुँदैन । एन्टिअक्सिीडेन्ट गुणहरुबाट भरिपूर्ण खानेकुरा सेवन गर्ने । जस्तो कि, ग्रीन टी । यसले शरीरलाई रोग प्रतिरोधी बनाउन सहयोग गर्छ । यसमा एक किसिमको पोषण तत्व हुन्छ, जसले क्यान्सरको कोशिकालाई बढ्न दिदैन । त्यसैले क्यान्सर प्रतिरोधी खानेकुरामा ग्रीन टी मूख्य मानिन्छ ।
सुर्यको किरण शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ, तर, एउटा सीमासम्म मात्र । ओजन तहमा प्वाल हुनाले घामको साथमा हानिकारक परावैजनी किरणहरु पनि आउँछन् जो शरीरका लागि हानिकारक हुन्छन् । यी किरणहरुको सम्पर्कमा लामो समय रहँदा स्किन क्यान्सरको खतरा पैदा हुन्छ ।
तर, क्यान्सर लाग्दैमा मृत्यु हुन्छ भन्ने छैन । यदि समयमै उपचार गरियो भने, त्यसको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । अझ क्यान्सरको लक्षण थाहा पाउनसाथ उपचार गरियो भने, तुलनात्मक रुपमा खर्च पनि लाग्दैन । क्यान्सरसँग हामी किन भयाभित छौ भने, एक त यसको उपचार जटिल छ । कहिले काहिं असंभव पनि साथै खर्चिलो पनि ।
क्यान्सरको लक्षण देखापर्नसाथ उपचार खोज्नुपर्छ । सही समयमा, सही ढंगले उपचार भएमा क्यान्सरमुक्त भइन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएकै छ, क्यान्सरको खास कारण भनेको हाम्रो खराब आनीबानी हो । यसमा खानपान, दिनचर्या, रहनसहन समेटिन्छन् । साथै वाह्य कुरा पनि क्यान्सरको कारण बन्न सक्छ । जस्तो कि, वातावरणिय प्रदुषण । धुलो-ध्रूँवा, रसायन, विकिरिण आदि क्यान्सरको कारण बन्छ । अर्कोचाहि, वंशानुगत । तर, यस्तो जोखिम १० प्रतिशतमा मात्र हुने बताइन्छ ।
४. वातावरणिय प्रदूषण पनि क्यान्सरको कारण बन्छ । जस्तो कि, काठमाडौंको धुलो-धू्रँवाले फोक्सो साथै नाक, कान, घाँटीको क्यान्सर बढाइरहेको छ ।
५. घामको किरण पनि कतिपय अवस्थामा क्यान्सरको कारण बनेको छ । त्यस्तैै उपकरणिय विकिरणले क्यान्सरको जोखिमलाई बढाउँछ ।